17 Nnansia akyi no, Yesu faa Petro ne Yakobo ne ne nua Yohane kaa ne ho kɔɔ bepɔw tenten bi so.+ 2 Na ɔsakrae wɔ wɔn anim maa n’anim hyerɛn te sɛ owia+ na n’atade yɛɛ hyɛnn te sɛ hann.+ 3 Afei hwɛ! Mose ne Elia yii wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn, na na wɔne no rekasa.+ 4 Ɛnna Petro ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Awurade, eye sɛ yɛwɔ ha. Sɛ wopɛ a, mesi ntamadan abiɛsa wɔ ha, wo de biako, Mose de biako, Elia de nso biako.”+ 5 Na ogu so rekasa no, hwɛ! omununkum hyɛnhyɛn bi bɛkataa wɔn so, na hwɛ! ɛnne bi fi omununkum no mu bae sɛ: “Oyi ne me Ba, nea medɔ no a migye no tom;+ muntie no.”+ 6 Bere a asuafo no tee saa no wɔde wɔn anim butubutuw hɔ na ehu kaa wɔn paa.+ 7 Ɛnna Yesu bae besusoo wɔn mu kae sɛ: “Monsɔre, munnsuro.”+ 8 Afei bere a wɔmaa wɔn ani so no, wɔanhu obiara sɛ Yesu nkutoo.+ 9 Na bere a wɔresian afi bepɔw no so no, Yesu hyɛɛ wɔn sɛ: “Monnka anisoadehu no ho asɛm nnkyerɛ obiara kosi sɛ wobenyan onipa Ba no afi awufo mu.”+ 10 Ɛnna asuafo no bisaa no sɛ: “Ɛnde dɛn nti na akyerɛwfo no ka sɛ etwa sɛ Elia ba ansa?”+ 11 Obuae sɛ: “Ɛyɛ nokware, Elia reba na ɔbɛtoto nneɛma nyinaa yiye.+ 12 Nanso mise mo sɛ Elia aba dedaw a wɔanhu no, na wɔyɛɛ no nea wɔpɛ biara. Saa ara nso na etwa sɛ onipa Ba no hu amane wɔn nsam.”+ 13 Ɛnna asuafo no hui sɛ Yohane Suboni ho asɛm na na ɔreka kyerɛ wɔn.+ 14 Na bere a wɔbaa nnipakuw no nkyɛn no,+ ɔbarima bi baa ne nkyɛn bebuu nkotodwe wɔ n’anim kae sɛ: 15 “Awurade, hu me ba yi mmɔbɔ efisɛ otwa na ɔyare, na ɔtaa tɔ ogya ne nsu mu;+ 16 mede no brɛɛ w’asuafo no nanso wɔantumi ansa no yare.”+ 17 Yesu buae sɛ: “O awo ntoatoaso kɔntɔnkye+ a wonni gyidi, bere tenten ahe na me ne mo ntena? Minnya mo ho abotare nkosi bere bɛn? Fa no brɛ me wɔ ha.” 18 Afei Yesu kaa adaemone no anim, na ofii ne mu,+ na abarimaa no ho tɔɔ no dɔn no ara mu.+ 19 Ɛnna asuafo no baa Yesu nkyɛn kokoam sɛ: “Adɛn nti na yɛantumi antu?”+ 20 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo gyidi a esua ntia. Nokwarem mise mo sɛ, sɛ mowɔ gyidi a ne kɛse te sɛ sinapi aba mpo a, mobɛka akyerɛ bepɔw yi sɛ, ‘Tu fi ha kɔ do,’ na ebetu, na biribiara nni hɔ a ɛrenyɛ yiye mma mo.”+ 21 —— 22 Ɛyɛ bere a wohyiaam wɔ Galilea no na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Etwa sɛ woyi onipa Ba no hyɛ nnipa nsa,+ 23 na wobekum no, na da a ɛto so abiɛsa no wobenyan no.”+ Eyi maa wɔn werɛ howee pii.+ 24 Bere a woduu Kapernaum no, wɔn a wogyigye drakma abien tow no baa Petro nkyɛn bɛkae sɛ: “Mo kyerɛkyerɛfo no tua drakma abien tow no anaa?”+ 25 Ɔkae sɛ: “Yiw.” Nanso bere a ɔhyɛn fie hɔ no Yesu dii kan bisaa no sɛ: “Simon, wudwen ho dɛn? Hena nkyɛn na asase so ahene no gye amanne anaa tow no? Wɔn mma anaa ahɔho nkyɛn?” 26 Bere a ɔkae sɛ: “Ahɔho nkyɛn” no, Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnde na ɛnsɛ sɛ mma no tua tow. 27 Nanso nea ɛbɛyɛ na yɛanto wɔn hintidua nti,+ wo de kɔ po kɔtow darewa na apataa a edi kan a wubeyi no, sɛ wubue n’anom a wubehu dwetɛ sika.* Yi ma wɔn fa tua me ne wo de.”+
^ Ano si “nnwetɛbona anan.”